Plume "Andro fahavaratra" - Moi Mili
Home > Plume "Andro maraina fahavaratra"
Plume "Andro maraina fahavaratra"
Ny plume voalohany an'ny Moimili "Andro fahavaratra" dia ravaka izay ho tian'ny ankizy rehetra. Ny tarika misy vakana dia voaravaka volom-borona, miloko amin'ny lamba vita amin'ny landihazo. Ny satroka volom-borona dia ho filana mety amin'ny filalaovana any India, dia ho tsara koa amin'ny fety amin'ny fety na fotoam-pivoriana sary. Izahay koa dia manome soso-kevitra hafa avy amin'ny fivarotanay.
Ny plume indianina ho an'ny ankizy iray dia hentitra ary voatana tsara amin'ny lamba rongony sy landihazo. Saron-doha vita amin'ny tanana misy vakana dia manampy ny toetrany tsy manam-paharoa. Noho ny fatorana mampitony dia mifanentana amin'ny lohan'ny zaza sy ny lohan'ny ray.
Ny saron-dakan'i Moi Mili dia ilaina ho an'ny fety, fety akanjo, fotoam-pivoriana na ho toy ny bika amin'ny fampisehoana.
Lamba: 100% Cotton sy 100% Lamba, nohamarinin'ny OEKO-TEX®.
Ny halavan'ny plume tsy misy kofehy: 45 cm.
Ny vokatra Moimili dia fanao tany am-boalohany novolavolainay, izay toetra mampiavaka ny halehiben'ny kalitao sy ny kalitao avo indrindra. Samy noforonina tany Polonina avokoa izy ireo. Ny vokatra hafa mitovy amin'ny Internet dia matetika tsy mahafeno ny fepetra momba ny kalitao.
Fitaovana: landihazo, rongony, voajanahary, vakana, maro loko manja, lamba landihazo, lamba marevaka, lamba floral
1 irery ihany no azo
Default Title - PLN 139.00 PLN